Madaxweynaha Glamudug oo hortagay Guddiga joogtada ah ee Aqalka sare. | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR GALMUDUG Madaxweynaha Glamudug oo hortagay Guddiga joogtada ah ee Aqalka sare.
Madaxweynaha Glamudug oo hortagay Guddiga joogtada ah ee Aqalka sare.
Madaxweynaha Galmudud mudane Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) ayaa maanta hortagay Guddiga joogtada ah ee Golaha Aqalka sare BFS, kadib kulan gaar ah oo lagu casuumay Madaxweyne Qoorqoor.
Previous articleGermany oo qorsheynaya in uu magan galiyo qaxooti ku sugan Greece.
Next articleAkhriso: Isku-aadka tartanka degmooyinka 2020-ka.